စက်ဘီးစီးခြင်း | October 2021
အဓိက > စက်ဘီးစီးခြင်း
စက်ဘီးစီးခြင်းအလွန်အကျွံ - လက်တွေ့ကျကျဖြေရှင်းချက်
ငါစက်ဘီးစီးလေ့ကျင့်နေလျှင်ငါဘယ်လိုသိရသလဲ သင်သည်အိပ်မပျော်ခြင်း၊ မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသောညများစတင်အိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အိပ်ရာဝင်ချိန်ထက် ပို၍ ပင်ပင်ပန်းသည်ဟုခံစားလျှင်နိုးလျှင်သင်အလွန်ကြိုးစားနေသည့်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်နေ့တာကြိုးစားအားထုတ်မှုတစ်ခုသည်အိပ်စက်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုမှုသည်ရောထွေးနေသော်လည်းအလွန်အကျွံလေ့ကျင့်ခြင်းသည်အိပ်စက်ခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာတွေ့ရသည်။ 2015 г.
စက်ဘီးစီးကင်ဆာ - ငါတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲ
စက်ဘီးစီးသူများကကင်ဆာပိုများလာသလား။ လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအရအမျိုးသားများအတွက်စက်ဘီးစီးခြင်း၏ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ သုတေသီများကစက်ဘီးစီးသူများသည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိရသော်လည်းမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပိုမိုဖြစ်နိုင်သည် ။18 ဇူလိုင်။ 2014 ခုနှစ်
သံသရာ၌ထိုင် - ရေရှည်ဖြေရှင်းချက်
ထိုင်သံသရာကဘာလဲ? ထိုင်ပါ N Cycle Resistance Low Exercise Bike သင်သည်ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးကိုခုခံနိုင်မှုမြင့်မားသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပေါ်တွင်ကယ်လိုရီ ၅၀၀ ကိုမီးရှို့နိုင်သည်။ တီဗီရှေ့တွင် ၃၄ ပေါင်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်ထိုင်။ သင်မပြောင်းနိုင်သည့်ခုခံနိုင်မှုအဆင့် ၈ ခုရှိသည်။ သင် bike.25 февраляချွတ်ရမဟုတ်လျှင်။ 2021 г.
ဆေးညွှန်းစက်ဘီးစီးမျက်မှန် - ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ
အကောင်းဆုံးဆေးညွှန်းစက်ဘီးစီးမျက်မှန်ကဘာတွေလဲ။ Oakley Flak 2.0 XL သည်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်အလွန်မြင့်မားသော Rx လိုက်ဖက်ခြင်းအတွက် PRIZM Road မှန်ဘီလူးများဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောအားကစားနေကာမျက်မှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Flak 2.0 XL တွင်မြင့်မားသောမှန်ဘီလူး၊ အပြည့်အဝထုပ်ပိုးထားသောဒီဇိုင်းနှင့် O-Matter ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဘောင်များသည်ပေါ့ပါးပြီးတာရှည်ခံသည်.22мая 2021 г.
အများအားဖြင့်မေးခွန်းများ - စက်ဘီးစီးသည့်ဂျာစီများသည်အဘယ်ကြောင့်အလွန်စျေးကြီးရသနည်း
စက်ဘီးအဝတ်အစားသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှစျေးကြီးသနည်း။ ဤထုံးတမ်းစဉ်လာကြောင့်စက်ဘီးစီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်အများစုသည်ဖြန့်ချိသူများကိုရှာကြသည်။ ဖြန့်ဖြူးသူအနေဖြင့်လက်လီရောင်းချသူများကွန်ယက်တစ်ခုရှိသည် ဖြစ်၍ ၎င်းတို့စတင်ရောင်းချရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ သို့သော်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်ပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသတ်မှတ်ထားသောဈေးနှုန်းဖြင့်ပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည် ။15 июл။ 2014 ခုနှစ်
Apple နာရီအတွက်စက်ဘီးစီးခြင်းအက်ပလီကေးရှင်း - ကြာရှည်ခံနိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများ
Apple Watch တွင်စက်ဘီးအပလီကေးရှင်းရှိသလား။ အမြန်နှုန်းနှင့်အကွာအဝေး - Apple Watch Series2(သို့) နောက်ပိုင်း၌ဤ metrics များကိုခြေရာခံရန်နှင့်သင်၏ iPhone အပြင်ဘက်လေ့ကျင့်ခန်းအကျဉ်းချုပ်တွင်သင်၏ပြင်ပစက်ဝန်း၏မြေပုံကိုဖော်ပြရန် GPS ပါ ၀ င်သည်။ 30 нояб။ 2020 г.
ဟေးလ်သည်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုထပ်ခါတလဲလဲ - မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း
Hill Repeats သည်စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်ကောင်းပါသလား။ ဒီလိုမျိုးအစည်းအဝေးတွေကစက်ဘီးစီးသူလိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းနဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုတည်ဆောက်ဖို့ကူညီပေးတယ်။ မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုနှင့်တစ်နာရီအောက်သာကြာသောကြောင့်သင်အချိန်တိုလွန်းပါက၎င်းတို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သင်စီးနင်းသင့်တဲ့ထပ်ခါတလဲလဲကြာမှုဟာမြင်းစီးသူရဲရဲ့ရည်မှန်းချက်အပြင်သင်၏အတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ 2016 г.
အစာခြေစနစ်သံသရာ - ဘယ်လိုဖြေရှင်းနည်း
အစာခြေခြင်းအဆင့် ၇ ဆင့်ကားအဘယ်နည်း။ အစာခြေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည်အစာခြေခြင်း၊ တွန်းကန်ခြင်း၊ စက်မှုအစာခြေခြင်း၊ ဓာတုအစာခြေခြင်း၊
musette အိတ်စက်ဘီးစီး - ငါတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြဘူး
စက်ဘီးစီးနေတဲ့ဂီတအိတ်ကဘာလဲ။ Tour de France တွင်စက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့်အစာအာဟာရကိုတောင်တက်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်းစသည်တို့တွင်အစားအစာနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပစ္စည်းများသယ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုသောအိတ်ငယ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ရေနှင့်အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုအတွင်းအစာကျွေးခြင်းဇုန်ရှိစက်ဘီးစီးသူများကိုပေးသည်။
စက်ဘီးစီးခြင်းသင်တန်းအစီအစဉ် - မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများကိုဖော်ပြထားသည်
တစ်ပတ်လျှင်နာရီဘယ်လောက်လေ့ကျင့်သင့်ပါသလဲ။ စက်ဘီးစီးသူများကိုတစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၂၀ မှ ၃၀ နာရီစီးလေ့ရှိသည်။ ultramarathon ဖြစ်ရပ်များအတွက်လေ့ကျင့်သူများအတွက်မြင်းစီးသူများသည် ပို၍ ပင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ အပန်းဖြေပြိုင်ကားသမား (အမျိုးအစား ၃၊ ၄၊ ၅ နှင့်မာစတာ) များသည်အများအားဖြင့်အပတ်စဉ် ၁၀ နာရီခန့်ထားလေ့ရှိပြီးအချို့သည်သူတို့၏အဖြစ်အပျက်များတိုပါကအရည်အသွေး ၅ နာရီမှ ၇ နာရီအထိကြာတတ်သည်။
အိုလံပစ်အမျိုးသမီးစက်ဘီးစီး - သင်မည်သို့ဖြေရှင်းကြဘူး
အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင်စက်ဘီးစီးခြင်းပုံစံ ၄ မျိုးမှာဘာတွေလဲ။ လက်ရှိတွင်အိုလံပစ်အစီအစဉ်တွင်စက်ဘီးစီးခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်း ၄ ခုရှိသည်။ More.Road စက်ဘီးစီးပါ။ More.BMX ကိုဖတ်ပါ။ More စက်ဘီးစီးခြင်း။ More.BMX Freestyle ကိုဖတ်ပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်။
Bill Walton စက်ဘီးစီး
Bill Walton စက်ဘီးစီးခြင်း - ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ
ဘီလ်ဝေါ်လ်တန်ဘယ်လိုစက်ဘီးစီးလဲ။ ဝေါ်လ်တန်သည်သူ၏စက်ဘီး၏လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းနှစ်သက်သည်။ ဘီလ်ဟော်လန်က ၆ ပေ ၁၁ လက်မဘောင်ကိုထားရှိရန်ပြုလုပ်ထားသောထုံးစံဖြစ်သည်။ ဝေါလ်တန်သည်သူ၏ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောဘယ်ဘက်ခြေထောက်နှင့် fused ankles တရံနှင့်အတူ“ ခြေထောက်နှင့်ပတ်သတ်သည့်စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ခြင်း” ကိုနှစ်သက်သည်
စက်ဘီးစီးစက်မောင်းစက်ဘီးစီးခြင်း - ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ
Portland မိန်းစက်ဘီးစီးရန်အဆင်ပြေသလား။ တက်ကြွသောစက်ဘီးစီးခြင်းအုပ်စုများနှင့်စီးနင်းခြင်းပွဲများနှင့်အတူ Portland ကိုမဂ္ဂဇင်းအားဖြင့်စက်ဘီးစီးနိုင်ဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ 23 мар။ 2020 г.
မိန်းမစက်ဘီးစီး - သင်မည်သို့ဆုံးဖြတ်သလဲ
စက်ဘီးစီးခြင်းကအမျိုးသမီး၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုမည်သို့ပြောင်းလဲစေသနည်း။ စက်ဘီးစီးခြင်းသည်ကြွက်သားများကိုတည်ဆောက်သည်စက်ဘီးစီးခြင်း၏ခုခံနိုင်သည့်အရာကဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အဆီများကိုလောင်ကျွမ်းစေရုံသာမကကြွက်သားများကိုပါတည်ဆောက်သည်။ အထူးသဖြင့် glutes, hamstrings, quads နှင့်နွားသငယ်တို့တွင်ဖြစ်သည်။ ကြွက်သားသည်အဆီထက်ပိုပါးသည်၊ ကြွက်သားများများပြားသောလူများသည်အထိုင်များသည့်အခါ၌ပင်ကယ်လိုရီပိုမိုလောင်ကျွမ်းသည် ။2 нояб။ 2020 г.
နွေရာသီစက်ဘီးစီးဘောင်းဘီ - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
စက်ဘီးစီး athens ga
စက်ဘီးစီးခြင်းအေသင် - လက်တွေ့ကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များ
အေသင်ဂျီစက်ဘီးစီးရန်ဖော်ရွေပါသလား အေသင်သည်စက်ဘီးစီးရန်အတွက်အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမေရိကန်စက်ဘီးစီးသူများအဖွဲ့မှစက်ဘီးနှင့်အဆင်ပြေသောအသိုင်းအဝိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ ဒေသခံအေသင်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်များသည်သာလွန်သောဗဟုသုတနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်စနစ်တကျစီးနင်းခြင်းနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကိုပေးသည်။
စက်ဘီးသမားခြေထောက် - ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
သင်၏ခြေထောက်များကိုစက်ဘီးစီးခြင်းကဘာလဲ? ခြေထောက်ကြံ့ခိုင်မှုစက်ဘီးစီးခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး၊ ၎င်းသည်သင်၏ quad များ၊ glute များ၊ တံကောက်ကြောဒဏ်ရာများနှင့်နွားသငယ်တို့ကိုပစ်မှတ်ထားသည်
စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါ - လက်တွေ့ကျဆုံးဖြတ်ချက်များ
စက်ဘီးစီးခြင်းသည်ပါကင်ဆန်အတွက်အဆင်ပြေပါသလား Lancet Neurology မှထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုအသစ်အရ Parkinson ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုတစ်ပတ်လျှင်သုံးရက်လျှင်စက်ဘီးဖြင့်စက်ဘီးဖြင့်စီးနင်းခြင်းကသိသိသာသာလျော့ကျသွားပုံရသည်.12.12.09.2019
ဆေးညွှန်းစက်ဘီးစီးနေသည့်နေကာမျက်မှန် - စာရင်းမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
သက်သတ်လွတ်စက်ဘီးစီးခြင်း - ပြည့်စုံသောရည်ညွှန်းသည်
Vegan သည်စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်ကောင်းပါသလား။ လုံလောက်သောအာဟာရကိုစားပါသက်သတ်လွတ်နှင့်သက်သတ်လွတ်အစားအစာများသည်အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝသောအစားအစာများတွင်ပါဝင်လေ့ရှိပြီး၎င်းသည်ကယ်လိုရီစွမ်းအင်များစွာမပေးဘဲလျင်မြန်စွာဖြည့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ကီလိုဂရမ် ၂ လုံးကိုသယ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားနေသော်လည်းအလွန်ကြီးမားသောလေ့ကျင့်ရေးနေရာတွင်ရှိနေလျှင်၎င်းသည်သင့်ကိုအလွန်အမင်းလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ 2015 г.